COVID-19 Translation - Af-Soomaali
Published: Apr. 13, 2020 at 10:34 AM CDT
Haye! ku soo dhowow bogga Facebook ee tooska ah ee Xarunta Dhaqamada-badan (Multi-Cultural Center). Anigu waa Mohamed Ahmed waxaan ahay turjubaan u shaqeeya Xarunta-Dhaqamada-badan (Multi-Cultural Center).
Muuqaalkan tooska ah wuxuu qayb ka yahay taxane aan qabanayno si macluumaadka daruuriga ah kuna saabsan COVID19 loo gaarsiiyo qoomiyadaha kala duwan ee aan ku hadlin Ingiriisiga kuna sugan Sioux Falls.
Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) waa cudur neef-mareenka kudhaca qofna qofka kale ugudbinkara.
Bukaanka qaba COVID-19 waxay qabeen xanuun neefsasho oo dhexdhexaad ah oo daran oo leh astaamo sida:
• qandho ah 100 digrii ama ka badan
• neefta oo yaraata
Xaaladaha daran, bukaanjiifka qaar waxay qabaan oof wareenka labada sambab, xubno badan oo shaqo joojin sameeyo, iyo walibo mararka qaar dhimasho.
Fayrasku/caabuqa wuxuu ku faafaa dadka isku dhawaaado (wax ka yar 6ft baar) dhibcaha kasoobaxa marka qof cudurka qaba uu qufaco ama hindhiso. Waxaa kale oo suura gal ah in qofkuu kudhaco COVID-19 adoo taabanaya dusha sare ee meel ama shay uu ku jiro fayraska/Cabuuqa ka dibna taabta sanka, indhaha, ama afka.
Ma jiro wax talaal ah oo looga hortagi karo COVID-19 mana jirto daawo u gaar ah ka hortaga fayraska. Dadka qaba COVID-19 ayaa raadsan kara daryeel caafimaad si ay ooga helaan caawitaan ka yareya calaamadaha.
Dadka da'da weyn iyo kuwa eey xaaladooda caafimaad liidato waxay halis dheeraad ah ugu jiri karaan COVID-19.
Si aan u ilaalino nafteena una joojino fiditaanka Cabuuqa/fayraska:
• Ka fogow udhawaanshaha dadka jiran/xanuunsan.
• Ka fogow shirarka/Kulanka bulshada ee ka badan 10 qof iskana ilaali taabashada jirka (xabadka oo la isgaliyo, gacmaha oo laisku salaamo iwm), ugu yaraan 6ft baar ka fogow dadka kale. Tani waa sababta dugsiyada/Skuulada iyo meheradahu ay ugu qasbanaadeen inay xiraan ama u xadidaan adeegyadooda.
• Ka fogow dhamaan safarada aan muhiimka ahayn, tusaale ahaan booqashhada bulshada ama safarada dukaameysiga/adeega. Aaditaanka dukaanka cuntada ama safarka kale ee daruuriga ah waa iska caadi balse/laakiin sida sharciga guud waa inaad gurigaga joogtaa.
• Iska ilaali in gacmahaaga oo aan la dhaqin ku taabato indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga.
• Badanaa gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan/ilbiriqsi. Isticmaal gacmo nadiifiye aalkolo leh oo ka kooban ugu yaraan 60% (boqolkiiba lixdan) aalkola hadii saabuun iyo biyo aan la heli karin.
• Ku dabool qufacaaga ama hindhisada kuna masax warqad, ka dibna ku tuur meesha qashinka.
• Nadiifi kana dil jeermiska meelaha badanaa la taabto sida walxaha iyo dusha sare ee meelaha.
Haddii adiga ama qeyb reerka ka mid ah aad jiran tihiin, gaar ahaan haddii adiga ama ayaguba aad isku aragtaan astaamaha COVID-19 sida qufac, qandho iyo / ama neefta/neefsiga oo kugu yaraado:
• joog guriga, xadid xiriirka/kulanka dadka kale kuu dhow, ku koobnoow hal qol, kana fogow dadka kale ee qoyskaaga, isticmaal musqul/suuli kale hadii ay suurta gal tahay, iska ilaali inaad la wadaagto waxyaabaha shaqsiga ah.
• Dhaq gacmahaaga mar walba
• Naso oo biyo badan cab
• Nadiifi sagxadaha si joogto ah
• Wac dhakhtarkaaga ka hor inta aadan aadin rug/xarun caafimaad.
Hadii aad dhawaan safar uga soo safartey wadan ama meel uu aad ugu faafay COVID-19:
• Wac dhakhtarkaaga una sheeg safarkaaga ugu dambeeyay. Waxay kaala talin doonaan wixi aad sameen laheed.
• Waa inaad keligaa guriga isku reebtaa oo aad xadidaa dhaq dhaqaaqaaga illaa 2 todobaad/isbuuc.
Hadaad ubaahantahay caawimaad, goobta ugu weyn ee lagala xiriiro Sioux Falls si aad uhesho macluumaad kusaabsan gargaarka degdega ah waa khadka caawinta (Helpline Center). Hadaad ubaahantahay caawimaad balse/laakiin aadan aqoon halka aad kaheli karto, wac 2-1-1 kadib/markaa taabo “2” ama booqo www.helplinecenter.org/.
Waxaad sidoo kale wici kartaa Xarunta Dhaqamada-kala-duwan (Multi-Cultural Center) 605-367-7401.
Haddii aad u baahato cunto ama sahayda waxyaabaha daruuriga ah:
• Dugsiga/Skuulka Degmada Sioux Falls wuxuu sii wadi doonaa inuu siiyo quraac BILAASH ah iyo qado qadarka mudada iskuulada ay xirnaan doonaan, laga bilaabo 11:30 subaxnimo - 12:30 duhurka ee cunug kasta, da'da 1-18. Cunooyinkaan waxay noqon doonaan qado hor uqaado hor ubax ah oo guriga loo qaadi karo si loo cuno.
o Goobaha qadada waa: Laura B. Anderson, Hawthorne, Hayward, Anne Sullivan, Terry Redlin, iyo Lowell Elementary Schools.
o Faahfaahin buuxda/dheer smore.com/ah6sh
• Quudinta South Dakota waxay leedahay Barnaamijka Cunnada ee socdaalka ah: cuntada waxay ku jiri doontaa bokisyo horey loo soo buuxshay iyo baca waxaana laga qaybin doonaa meesha baabuurta lala soomarayo. Ka eeg www.feedingsouthdakota.org jadwalka.
• Cunnooyinka loogu tala galay carruurta 'Sioux Empire Kids' waxay kuu diyaarin doonaan cunto in gurigaaga la keeno. Booqo: completemediainc.com/food-for-se-kids wixii faahfaahin ah.
• Corona Help SF waxay gurigaaga gaarsiin doontaa waxyaabaha daruuriga ah isla markaana waxaad heli doontaa cunno aad soo qaadan karto. Booqo www.coronahelpsf.com/i-need-help wixii faahfaahin ah.
• Duqa Magaalada, Paul TenHaken, wuxuu warqad u diray dhammaan hooy diyaariyeyaasha ee Sioux Falls si uu ugu booriyo inay la shaqeeyaan kiraystayaasha/ijaarka inay dib u dhigaan wixii guri ka saarid ah iyadoo ay ugu wacan tahay caqabado maaliyadeed oo uu sababay caabuqa COVID-19. Hadaad ubaahantahay caawimaad xaga arimaha guriyeynta fadlan wac Xarunta Dhaqamada Kala Duwan (Multi-Cultural Center )605-367-7401.
Hadii shaqada lagaa fadhiisiyo ama saacadaha aad shaqeyso hoos u dhacaan sababa laxariira COVID-19 awgood:
• Duqa Magaalada wuxuu aasaasay Sanduuqa (One Sioux Falls Fund) kaa soo aad dalban karto kaalma maaliyadeed. Ka wac Xarunta Caawinta (Helpline Center )2-1-1 ka dibna riix “2” ama booqo www.helplinecenter.org/.
• Si aad u codsatid macaashka/lacagta dadka shaqo la'aanta, waxaad wacdaa Waaxda Shaqada (SD Department of Labor) ee 605-773-3101 ama booqo dlr.sd.gov.
• Aasaaska Beesha Katooliga (The Catholic Community Foundation )waxay leedahay lacag ay kubixiso kaalmo dhaqaale. La xiriir kaniisada deegaankaga ama baadariga wixii faahfaahin ah.
• Hadii aad xareysay canshuur celinta sannadka 2018 ama 2019, Dawladda Mareykanka ayaa hal mar lacag bixin doonta kuuguna diri doonto bangiga aad kudiwaan galisatay cashuur celintaadii ugu dambeysay ee aad soo gudbisay. Qof kasta oo eey soo gasho ama sameeyo ila $ 75,000 wuxuu heli doona:
o $ 1200 shaqsiyaadka
o $ 2400 lammaanaha
o $ 500 oo dheeri ah ilmo kasta oo ka yar 16 sano oo lagu soo daray diiwaangelinta canshuurta.
Taasi waa dhamaadka muuqaalka tooska ah maanta. Waad ku mahad santahiin Dakota News caawinta tan.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad kadhan ah waxkasto aan ka hadlay maanta fadlan kala xiriir Xarunta Dhaqamada Kala-duwan(Multi-Cultural Center)605-367-7401.
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin daawashada, waxaan rajeyneynaa in macluumaadka aan soo bandhignay yahay mid waxtar leh - xusuusnow inaad gacmahaaga dhaqdo, isku tawabar/ abaabi in aad bulshada ka fogaatid, intaas waxaa dheer, nabad galyo ku sugnoow!